समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाइ » खबरहरुको एउटै केन्द्र
समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाइ
मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ ११:५० मा प्रकाशित !
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नेपालको संविधानले कल्पना गरेको राज्यको संरचनाको मोडललाई बुझ्न आग्रह गरेका छन्।
सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५का सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संविधानले कल्पना गरेको राज्य संरचना अनुसार नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिने भएकाले संविधानले कल्पना गरेको राज्यको मोडललाई बुझ्न आग्रह गरेका हुन्।
संविधानमा उल्लेख समावेशी, समानुपातिक तथा समविकासको अवधारणा अनुरुप नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण भएको भन्दै उनले संविधानको सिमालाई बुझ्न आग्रह गरे। उनले संविधानले दिएको बाटोसम्म विधेयक समाजवाद उन्मुख भएको दाबी गर्दै धेरै क्रान्तिकारी धार लिएन कि भनेर चिन्ता नलिन आग्रह गरे।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको , संविधान अनुसार संघीय संरचनालाई अक्षरस स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए। विधेयकमा नागरिकको खुसीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
श्वेतपत्रका बारेमा उठेका जिज्ञासामा भने उनले ट्रेजरी भनेर आफूले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयमा रहेको पैसाको कुरा गरेको स्पष्ट पारे। उनले आर्थिक वृद्धि र टे«जरीका कुरालाई एकठाउमा राखेर नबुझ्न आग्रह गरे। उनले भने, “ हामीले तल पठाएको पैसालाई पनि हिसाब गरेर हामीसँग पैसा छ भन्ने हो भने, अर्को सरकारसंग भएको पैसा हामीसंग छ भनेर हिसाब गर्ने हो भने त के पो होला फेरि ? यो ट्रेजरी म्यानेजमेण्टको कुरा पनि बुझ्दिनुपर्यो सांसदहरुले। त्यति सजिलो कुरा छैन।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले विधेयकमा सिद्धान्ततः सबै नागरिकलाई लोककल्याणकारी राज्यको दायरामा ल्याउने, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र सवलीकरणमा अघि बढाउने भनिसकेपछि खण्ड खण्डमा सिद्धान्त नै नखोजी बजेटका कार्यक्रम पर्खन सुझाव दिए। उनले आगामी बजेट संघीयता कार्यान्वयनको भएको पहिलो बजेट हुने भएकाले इच्छाशक्ति र नयाँ उत्साहका साथ कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे।
PREVIOUS POST Previous post: बैंग्लोरले पन्जाबलाई १० विकेटले हरायो, कोहलीले तोडे वार्नरको रेकर्ड
NEXT POST Next post: १४ वर्षीयाले पार्किङमा जन्माइन् बच्चाः आमाबुवाले भने, ‘हामी अचम्ममा छौं,
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ ११:५०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ ११:५०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ ११:५०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ ११:५०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ १, २०७५ ११:५०